Maitiro Ekubvisa iyo iyo Pesky -2 Nyaya ine WordPress Slugs | Martech Zone
Chishanu, February 6, 2015 Chishanu, February 6, 2015 Douglas Karr
Ndinovimba handisi ndoga zvinonetsa izvi, asi ndinozvivenga pandinowedzera chikamu pane WordPress blog uye iyo URL inoshanduka kuita chimwe chinhu senge / chikamu-2 /.
Nei WordPress Inowedzera iyo -2?
Maki ako, zvikamu, mapeji uye zvinyorwa zvese zvine slug izvo zvinotsanangurwa mutafura imwe chete uko iwe haugone kuve neakadzokororwa pakati penzvimbo nhatu. Izvo zvinowanzoitika ndezvekuti iwe une peji, post kana tag ine slug saka iwe haugone kuishandisa sechikwata slug. Panzvimbo pekukuudza izvozvo, WordPress inongoverenga iyo slug ne -2. Kana iwe ukazviita zvakare, zvaizowedzera -3, zvichingodaro. Slugs inofanirwa kuve yakasarudzika mune yese yemukati manejimendi management system.
Heino skrini yenyaya yacho nemumwe wevatengi vedu.
Ndogadzirisa Sei iyo -2?
Kutanga, iwe unozofanirwa kutsvaga mapeji, zvinyorwa, uye ma tag ezita reruzivi raunoda kuve naro. Ukangoiwana, iwe unozofanirwa kugadzirisa iro peji, post uye / kana tag kuti uwane imwe slug. Kazhinji kazhinji kwete, isu tinozviona sechigi uye tinobvisa taki kubva kune yega yega yezvinyorwa. Kuti uite izvi:
Tora iyo slug zita iyo yatiri kutsvaga mune yekutsvaga munda pane tag peji.
Rondedzero yemaposi iyo tag yakashandiswa mairi ikozvino yakanyorwa.
Huwandu hwenzvimbo iyo teki inoshandiswa mukati hunoratidzwa kurudyi kweteki.
Dzvanya pane huwandu ihwohwo uye iwe unowana rondedzero yeimwe neimwe yemapositi iyo iyo tag inoshandiswa mairi.
Click quick edit pane yega yega posvo, bvisa iyo tag, uye chengeta iyo posvo.
Dzokera kune iyo tag peji, tsvaga iyo tag, uye iwe unofanirwa kuona kuti iyo tag yakanyorwa mune 0 mbiru.
Kana iri 0, bvisa iyo tag.
Izvozvi tag yacho yadzimwa, unogona kugadzirisa chikamu slug uye kubvisa iyo -2.
Sezvo mapeji epawebhusaiti yako anogona kunge akaiswa indexed mumhedzisiro yekutsvaga, iwe uchazoda kuendesa zvakare iyo yekare URL ne -2 kune iyo URL nyowani isina iyo
Tags: chikamu slugbvisa tagpeji slugpost slugbvisa tagslugsteki sluggadziridza slugWordPress